भ्रष्टाचारमा व्यस्त सरकार - Pradesh Today भ्रष्टाचारमा व्यस्त सरकार - Pradesh Today
भ्रष्टाचारमा व्यस्त सरकार
सल्यान, १५ साउन । वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा व्यस्त भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् । कम्युनिष्टको सरकार नातावादमा लागेका कारण मुलुकको विकास भ्रष्टाचारले लिप्त पारेको उनीहरूले बताए ।
नेपाली कांग्रेस बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको नगर कार्यसमितिको आयोजनामा भएको कार्यकर्ता भेलाका अवसरमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । दुई तिहाईको सरकारले मुलुकलाई संकटमा पार्दै गएकाले चौतर्फी आलोचना सुरू भएको उनीहरूले बताएका हुन् ।
१५१ जना पार्टी प्रवेश
यसैबीच भेलाका अवसरमा १ सय ५१ जना पार्टी प्रवेश गरेका छन् । कम्युनिष्टको सरकारले कामभन्दा धेरै आलोचना खेप्दै आएको भन्दै नेकपा परित्याग गरी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् ।
पार्टी प्रवेश गर्नेहरूमा वडा नम्बर १ बाट ५ जना, वडा नं. ३ बाट ४ जना, वडा नं. ६ बाट ५६ जना, ७ नं वडाबाट ६ जना, ८ नं वडाबाट ७९ जना र ११ न वडाबाट १ जना गरी १ सय ५१ जना रहेको छन् जिल्ला सदस्य दुर्गा खड्काले जानकारी दिए ।
दश वर्षसम्म पनि बनेन पुल